Mcommerce na - etozi 200% Ọsọ ọsọ karịa Ecommerce | Martech Zone
You chetara ihe mbụ ị zụtara na ekwentị mkpanaaka gị? Amachaghị m mgbe m mechara zụta ekwentị m, ana m eche na ọ bụ site na ngwa ngwa Amazon ma ọ bụ Starbucks. Purchazụta ekwentị nwere oke ike - otu bụ ịdị mfe nke iji na teknụzụ, nke ọzọ na-atụkwasị azụmahịa ahụ obi. Nzụta ekwentị na-aghọzi nke abụọ, agbanyeghị, na ọnụ ọgụgụ site na Coupofy gosi ya.
N'ezie, ọ bụ ezie na elere anya na e-commerce ga-eto site na 15%, a na-atụ anya azụmahịa azụmahịa na-eto site 31% na 2017!
Japan, United Kingdom na South Korea na-ebute uto na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% afọ karịa afọ. Australia na Netherlands emeela azụmahịa azụmahịa site na 35%.
Na 2015, ụlọ ọrụ ise kacha elu hụrụ nnukwu azụmaahịa ekwentị bụ GOME Electrical Appliances with 634%, Nebraska Furniture Mart with 500%, Yihaodian with 456%, VIPShop Holdings with 451% and HappiGo with 389%.
Ndị na-enye azụmahịa azụmaahịa kachasị na US bụ TicketMaster, Apple, Target, QVC na Kohl's (n'usoro ahụ). N'ụzọ dị ịtụnanya, Amazon erubeghị n'elu 5! Ndị ahịa a nile ahụwo gburugburu 50% uto na okporo ụzọ mkpanaka na ahịa. Na ọkwa zuru ụwa ọnụ, onye ndu e-commerce eBay na-aga n'ihu na-elekwasị anya na-eme ka ọ dịrị ndị na-azụ ahịa mfe ịzụ ahịa na smartphones na mbadamba dị ka uru nke ịzụrụ site na ngwaọrụ ndị a toro 21% kwa afọ.
Nkezi ọnụahịa nke otu ụgbọ ibu ka dị elu karịa ndị ọrụ mbadamba
The nkezi iji uru nke onye na-azụ ahịa mbadamba bụ $ 100 mgbe onye na-azụ ahịa si na ntụgharị smartphone bụ $ 85 na nkezi. Ọzọkwa, ndị na-azụ ahịa ekwentị sitere na ama ama ama ama ama na usoro iwu ha bara uru 22% karịa ndị ibe ha iOS. Agbanyeghị, enwere ndị ahịa ugboro atọ karịa na ngwaọrụ gam akporo. Nke ahụ ezughị ezu iji hụ na ahụmịhe gị na-arụ ọrụ n'ofe iOS na gam akporo.
Tags: amazonapụlnkezi iji urundinaebayecommerceM-azụmahịa zuru ụwa ọnụmcommerce zuru ụwa ọnụJapankolsngwa ahiaịtụ uruQVCSouth Koreastarbucksmbadamba na uru uru bara urulekwasịrịTiketiMasterUnited Kingdom